Kumanaan Falastiiniyiin ah oo dhaawacmay iyo dhimashada 58 ruux rabshado hor leh – Radio Daljir
Maajo 15, 2018 7:48 b 0
Ku dhowaad 58- ruux oo Falastiini ah ayaa ku geeriyooday marinka Gaza, kumanaana waa ay dhaawacmeen , iyadoo ay ku beegantahay 70- sano guuradii kasoo wareegatay aasaaskii dowladda Israil iyo qabsashadii dhulka Falastiiniyiinta May 15, 1948 .
Falastiinyiinta ayaa waday tan iyo todobaadyadii lasoo dhaafay muddaaharaad ka dhan Israil, iyagoo ku baaqaya in qaxootiga Falastiiniyiinta dib loogu celiyo meelihii sida qasabka looga raray sanadkii 1948dii.
Tan iyo bilowgii mudaaharaadka 30kii March Israailiyiinta ayaa dilay boqol iyo todobo Falastiinyiin ah, iyadoona dhaawaca uu yahay wadar ahaan 12-kun oo ruux.
Wasaaradda Caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay dadka geeriyooday inay ku jirto cunug 8- bilood jir ah oo rasaasta gaaska ay ku rideen Isra’il,
Warbaahinta Al-Jazeera ayaa sheegtay ku dhowaad 58- ruux inay geeriyoodeen Isniintii shalay, laba kun iyo todobo boqol oo kalena ay ku dhaawacmeen rasaas ay fureen ciidamada Israa’il oo gaas iyo bambooyin ay ka mid yihiin.
Dadka dibad baxa dhigayay ayaa doonayay inay xoog ku galaan dhismaha safaaradda Mareykanka ee magaalada Jerusalam (Qudus) oo shalay dowladda Mareykanka ay usoo rartay.
Madaxwaynaha Turkiga Recep Tayyib Erdogan oo booqasho ku jooga London ayaa ku eedeeyey Israa’il inay tahay dowlad argagixiso oo ay waddo xasuuq, sida uu baahiyay wakaaladda wararka Turkiga Anadolu agency, waxaana xukuumadda Ankara ay ku dhawaaqday sadex maalin oo baroor diiq ah oo dalkeeda kadhaca.